Soomaalida Magafayaasha Noqday Ee Turkiga | #1Araweelo News Network
W/Q. M Duale
Dhalinyarada Afka Turkiga baratay, ee ku nool dalkan Turkigu, waxaay dadka yimaadda u gaystaan tacaddiyo aan lasoo koobi karin. Tusaale ahaan, Dhakhaatiirta inta ay heshis la galaan ayay dadka dul saaraan lacag, lacagtaas oo aad u badan marka loo eego dadka danyarta ah ee halkan caafimaadka usoo raadsada. Kudarso oo, qofkaasi lacag turjubaannimo ah na wuu ka qaaday.
Maalin dhawayd waxaa dhacday, gabadh oo toban sanno jirtay ayaa cancer laga helay, Turkey ayaa loo keenay Dhakhtar. Ninkii turjumaanka u ahaa, ayaa u sheegay in lacagta Dhakhtarku jaban tahay, haddii ay kaadhka qaxoontiga usoo qaadaan inanta yar, waanu usoo qaaday. Ku darso oo qofka xanuusanayaa, marka uu haysto Kaadh kaa qaxoontiga, Dhakhtarku waa u bilaash, dhib se waxa uu ka taagan tahay hooyada dhashay Afkii ma taqaanno.
Wiil ay ugu yeedhatay turjumaannimo, ayaa maalin kasta ka qaadaayay 1000$ isaga oo u sheegaya in ay tahay lacagta lagu daweeyo gabadha yar. Muddo ku siman 10 cisho markii uu sidaas ku waday, ayay gabadhii yarayd geeriyootay subax hore isaga oo aan wali iman.
Dad Soomaali ah oo ay ku wada jireen Dhakhtarka, ayay tidhi: ii waydiiya, mayd ka ayaan qaadanayaaye, saaka na miyaa layga rabaa lacagtii!? Markii loo sheegay masuuliyiintii Dkakhtarka, madaxa ayay qabsadeen, waxa ayna u sheegeen in ay ku dawayn jireen bilaash maadama oo ay kaadhka qaxoontiga haysato!!
Sida oo kale, 2018 kii, mar aan aabbahay Istanbul xaalad caafimaad u keenay, waxa aan arkay dhawr qof oo ay lacago badan dul saareen iyaga oo tii turjumaanimadana ka qaadaya! Intaas uun kuma eeka e, dadku wax kasta oo ay u baahdaan in laga caawiyo, lacago ayay ka dhacaan. Tusaale ahaan, dadka guryaha kiraysanaaya ee magaalada ku cusub!
Haddaba, waxa yaab igu dilay, qof Soomaali ah, walaalkaa ah, dalshisheeye jooga oo adiga caawimaad kaaga baahday, xanuusanaaya, sidee ayaad xoolihiisa u hungurayn kartaa? Aaway damiirkii walaalnimo iyo kii tolnimo. Wada dhalashadii Soomaalinimo maxaa ku dhacay?
F.G Dad badan oo wanaagsani waa ay jiraan, laakiin sidan ayay u badan yihiin.
Xigasho niciima abwaan qorane.
Ra’yiga lagu soo bandhigay maqaalkanwuxuu ka turjumayaa aragtida qoraaga, mana aha mid ka turjumaya siyaasadda tifaftirka, ama Faallada Araweelo News Network.